Su'aasha by Lithiumeel
Bixinta ka timid Switzerland
Su'aashaada Hello! Waxaan xiiseynayaa daawada Lithiumeel. Maadaama ay leedahay laba arji oo way ka duwanaan kartaa (macluumaadkaan kuma qorna sanduuqa), waxaad u diri kartaa tilmaamaha, fadlan. Si daacadnimo leh, Catherine.
Nasiib daro waanu diri karnaa tilmaamaha. Waxaan ka iibsanaa bakhaar ku yaal Switzerland, mana jiri doono tilmaamo ilaa aan iibsano. Waxaad fiirin kartaa liisas kasta oo ka mid ah aaladaha caafimaadka ee dalka swiserland iyo amar ku qoran lambarka maqaalka. Dawo kasta waxay leedahay.
Nuqul noogu soo qor info@swiss-apteka.com waxaanan caddayn doonaa helitaanka.
Waqtigan xaadirka ah ee Switzerland ma iibineyso. Fiiri qaybta Jarmalka ee sidoo kale diyaar u ah bixinta:
Fadlan gali magac
Fadlan gal telefoonka
Fadlan qor E-mailkaaga
Buuxi qoraalka codsiga
Halkan waxaa ku qoran liiska sheyga farmashiyaha ee Switzerland
Bixinta alaabooyinka Ruushku waa isticmaalka shakhsi ahaaneed iyo qadarka aan ka badnayn 1000 euros.
Waxaad iibsan kartaa oo kaliya dukaamada rasmiga ah ee Switzerland.
Catalog of wax soo saarka caafimaadka Swiss leh dhalidda dhammaan dalalka adduunka.
Iibsashada alaabta aduunka oo dhan adoo adeegsanaya shirkad Geneva ah
© 2011-2019. Bixinta alaabta boostada laga soo qaado farmashiyada Switzerland Swiss-Apteka.Com